Madoobe oo agaasimayaasha maamulkiisa digniin u jeediyay – Bandhiga
Madoobe oo agaasimayaasha maamulkiisa digniin u jeediyay
Waxaa maanta magaalada Kismaayo ka dhacay kulan u dhaxeeyay Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo agaasimayaasha wasaaradaha iyo guddoonka guddiga shaqada iyo shaqaalaha ee Dowlad goboleedkaasi.
Kulanka uu madaxweynuhu la qaatay agaasimayaasha iyo guddiga ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in ay ahayd hubinta iyo dhagaysiga waxqabadka wasaaradaha iyo guddiyada madaxabannaan ee ka dhisan maamulka Jubbaland.
Agaasimayaasha ayaa mid mid uga warbixiyey waxqabadka wasaaradaha ay maamuulaan, sida ay u fulaan mashaariicda kusoo dhaca wasaaradaha iyo caqabadaha ay wajahaan xilliyada ay ku gudo jiraan daadejinta adeegyada bulshada.
Dhagaysiga kaddib ayaa maadxweyne Axmed Islaam Madoobe wuxuu agaasimaayaasha uga mahadceliyey kuna dhiiri galiyey shaqada ballaaran ee ay u hayaan bulshada reer Jubbaland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana ballan qaaday in caqabad kasta oo soo wajahda daadejinta adeegyada dowladu shacabka gaarsiiso loo xallin doono sida ugu dhakhsaha badan.
Madaxweynaha ayaa si adag uga digey in agaasimayaashu ku dhex milmaan siyaasadda maadaama aysan shaqadoodu ahayn siyaasad ee ay tahay inay adeegyada dowlada gaarsiiyaan shacabka.
Ololaha doorashooyinka Soomaaliya oo si dardar leh uga socda Nairobi
Meelmarinta xukuumada cusub ee Soomaaliya oo la muddeeyay